‘भाग्यवाद र विकास’को ३० वर्ष
मानवशास्त्री डोरबहादुर विष्टले लेखेको चर्चित पुस्तक हो-‘फेटलिज्म् एण्ड डेभलपमेन्ट’ (भाग्यवाद र विकास), जहाँ भाग्यवाद र विकासको अर्थ र अन्तरसम्बन्ध पर्गेल्ने प्रयास मात्र होइन, नेपालको विकासमा भाग्यवाद नै प्रमुख अवरोधक भएको निष्कर्ष पनि छ। मानवशास्त्री विष्टले आफ्नो वर्षौंको अध्ययनबाट किन ...
‘अन्तर्दृष्टि’: एक दृष्टिविहीनको संसार यात्रा
विद्यावारिधि गर्ने पहिलो दृष्टिविहीनको नाम मात्रैले पनि कमलको परिचय अटाउँदैन । १२ वर्षको उमेरमा विद्यालय टेकेर पनि जापानको प्रसिद्ध टोकियो र चुकुवा विश्वविद्यालयमा पढेर विश्वप्रसिद्ध अमेरिकाको हार्भर्ड विश्वविद्यालयको अनुसन्धानकर्मीसम्मको यात्रामा उनले कस्ता अनुभूतिका उकाली–ओराली हिँडे भन्ने प ...
भुइँमान्छेको सपनाः 'मुसा मानुष'
मुसा र मान्छेले सजाउने सुठगित सपना प्राय: सखाप हुन्छन् । — रोवर्ट बर्न्स ‘पैताला’ उपन्यास लेखेर नेपाली साहित्यमा आफ्नो छुट्टै छवि बनाइसकेका लेखक गनेस पौडेलको दोस्रो कृति हो— ‘मुसा मानुष’ । यो उनको पहिलो अनु-सिर्जना हो । स्टेनबेकको 'अफ् माइस एन्ड मेन' संस ...
डायरीका लेखक हेमराज भट्ट नेपालका शिक्षक होइनन् । उनी भारतको उत्तराखण्ड राज्यको उत्तरकाशी जिल्लाको एउटा दुर्गम र विकट गाउँमा अवस्थित एक प्राथमिक विद्यालयका शिक्षक हुन् । राजनीतिक हिसाबले हाम्रो र हेमराजको देश एवं परिवेश भिन्न भए पनि पहाडी ग्रामीण भेगका प्राथमिक विद्यालयमा शिक्षण गर्ने त्यहाँ र यहाँका ...
हरिबहादुर थापा नेपालको शासन व्यवस्था, भ्रष्टाचार र प्रशासनिक संस्कृतिमा कलम चलाइरहने सिद्धहस्त नाम हो । मैले छापाहरूमा उनका थुप्रै रचनाहरू पढेको छु । नेपालको शासन व्यवस्था इमान र निष्ठामा चलोस्, जनताले सास्ती खेप्नु नपरोस् र लोकतन्त्रको लाभांश सबै जनताले निर्बाध रूपमा पाउन् भन्ने मान्यता राख्न ...
स्वर्ग र नर्कको धार्मिक अवधारणामा विश्वास गर्नुहुन्छ? गर्नुहुन्छ र आस्तिक हो भने जिउँदै स्वर्गलोकको यात्रा! गर्नु हुन्न र नास्तिक हो भने एउटा नयाँ मायावी संसारको परिकल्पनामा विचरण। शारदा शर्माको दोस्रो उपन्यास कम्प त्यही यमलोकको मायावी संसारको यात्रा वर्णन हो। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको घटनाबा ...
अनुभूतिको महासागर : अन्तर्मनको यात्रा
- डा.ज्ञानू पाण्डे
अन्तर्मनको यात्राको पाण्डुलिपि मैले अद्योपान्त पढेँ । यो पाण्डुलिपि पढ्न मैले अलि बढी नै समय लगाएँ । अघिअघि अरू लेखकहरूको पाण्डुलिपि पढ्नुपर्दा मैले कहिले पनि यतिविधि समय लगाएको थिइनँ । दुईतिन बसाइमा नै पढिसक्थेँ र त्यसमाथिको आफ्नो टिप्पणी सरर्र लेखेर दिई जिम्मेवारी सकिदिहाल्थेँ । त्यसो गर्दा म आफैल ...
- पदमसिंह कार्की जन्मेको छ महिनामै ‘आमा टोकुवा’को आरोप खेपेका ‘मदन राजा’ स्कुल भर्ना हुँदा मात्र मदनकृष्ण श्रेष्ठमा बदलिए । काठमाडौँबाट केही माइल पश्चिमको उनको जन्मस्थल यस्तो ठाउँ हो, जसलाई नेपालले भोटसँग जितेपछि यसको नाम जितपुर फेदी रहन गयो । यो ...
यो पुस्तक तोत्तो–चानः झयालमा रमाउने त्यो सानी केटी जापानकी एक सुप्रसिद्ध कलाकार तेच्चुको कुरोयानागीको बाल्यकाल, विशेषतः प्राथमिक तहमा पढ्दाको संस्मरण हो । पुस्तककी प्रमुख पात्र स्वयं लेखक नै हुन् र ‘तोत्तो–चान’ बाल्यकालमा आफन्तले माया गरेर बोलाउने उनकै नाम हो । तोत्तो&nd ...
सुगन्धित 'करोडौं कस्तूरी'
फलामे ढोका भनिने एसएलसी परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएपछि पास भएका ४७ प्रतिशत परीक्षार्थी उच्च शिक्षा अध्ययनको तयारीमा छन् भने फेल भएका ५३ प्रतिशत परीक्षार्थी निराश भएर अर्को परीक्षाको पर्खाइमा। हरेक वर्ष जेठ अन्तिम वा असार पहिलो हप्तातिर हुने एसएलसी रिजल्टले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा एउटा बहस पनि लिएर ...
त्यसपछि फुलेन गोदावरी
फरक दृष्टिकोण खोजिरहेको छ समय । लेखनमा पनि भिन्न शैली, प्रस्तुतिसाथै नवीन विषय पर्खिरहेका छन् पाठक । छरपस्टै छन् लेख्नुपर्ने कुराहरू । टिप्नुपर्ने विषयहरू अलपत्रै परिबसेका छन् आँखा डिलमै । हामी फेरि पनि लेख्ने कुरा या भनौँ अभिव्यक्तिको सकसमा पर्छौं । लाग्छ अब त लेख्ने कुरै पो सकिएछन् कि । डरला ...
‘नलेखिएको ईतिहास’ –आरके मैनालीको ‘लङ मार्च’ !
समयको मागलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा कर्ताले गर्ने क्रियाकलाप, तथा गतिविधिले ईतिहास निर्माण गर्दछ । जसले इतिहास बनाउँछ, त्यसले इतिहास लेखनलाई ध्यान दिदैन वा महत्व दिदैन । त्यसैले ईतिहास अर्कैले लेख्छ । इतिहास लेखनमा विभिन्न तत्वले भूमिका खेल्न सक्छ । जस्तो कि, ईतिहासकारहरुले जित्नेको इतिहास लेख्छन् । ह ...
बाँकी नेपालले कर्णालीलाई चिन्ने भनेको नुन र चामलको अभावले हो । झाडापखालाले त्यहि कर्णालीलाई सताउँछ, नुनको ढिक्का र ‘चावँल’को गेडाले त्यहि कर्णालीलाई सताउँछ । औषधीको गोली, खडेरी र अनिकालले पनि त्यहि कर्णालीलाई सताउँछ । समग्र राज्य ब्यबस्थाले पनि त्यहि कर्णालीलाई सताउँछ । बर्षैपिच्छे सुदुर ...
यस बेला पत्रकार नारायण वाग्ले पल्पसा क्याफे उपन्यासबाट नेपाली साहित्यमा चर्चाको शिखरमा रहेका छन । साथै उनको यस कृतिले यस वर्षको मदन पुरस्कार प्राप्त गरेको छ । म चर्चा गर्दैछु त्यस उपन्यासको भित्री कथाहरू होइन, सिर्फ बाहिरी आवरण । प्रकाशक नेपा-लय रहेको यस् कृतिको बाहिरी आवरण साधारण छ। आवरण प्रसिद्ध क ...
पुस्तक समिक्षा – ‘समर लभ’
युवा आख्यानकार सुबिन भट्टराईको उपन्यास ‘समर लभ’ फाइनप्रिन्टले भर्खरै बजारमा ल्याएको छ । पछिल्लो समय तन्नेरीहरुको कलेज रोमान्स, प्रेम र विछोडको अविस्मरणिय प्रेम कहानीले बुनिएको ‘समर लभ’ यो विन्टरको जाडोमा पढ्न लायक छ । कलेजका युवा पुस्तामाझ फेसन झैँ बन्दै गएको चिया, चुरोट र से ...
पुष्पराज दुवाडी – नेपालगन्जका लेखक नयनराज पाण्डेद्धारा लिखित उपन्यास सल्लीपिर पढे । खबुज र करोडौ कस्तुरी पछि पढेको उपन्यास यहि थियो । तराइ भागकोे कथा उर्ताने लेखकको हिमालको विषयबस्तु समेटेको सल्लीपिर पढीरहदा कैले पुगे होला लेखक खुम्बु क्षेत्र भन्ने लागिरहन्छ ।उलार,लु अनि घामकिरी पढेपछि छो ...
जीवन मसिनो सिन्कामा उनेको आँपको पातजस्तै हो । विभिन्न दिशाबाट आउने हावाका स्पर्शले यसलाई जोडजोडले रिगाउँछन् । कुनै निश्चित समयमा यो जीवनरूपी 'फिरफिरे' जमिनमा खस्छ र माटो अनि पानीसँगै बिलाउँछ । बाँकी रहन्छन् केवल सम्झनाहरू । यस्तै भावना बोकेको छ बुद्धिसागरको नवप्रकाशित उपन्यास फिरफिरेले । लेखक व ...
म वर्षात् होइन बादलको आसमा छैन म त त्यो मेघ हुँ जसको अस्तित्वबिना वर्षात्को अस्तित्व छैन... सानु शर्माका यी काव्यिक हरफहरू कुनै कवितासङ्ग्रहबाट साभार गरिएका होइनन् । एउटा धारिलो उपन्यासको प्रवेशद्वारमा आकर्षक साइनबोर्डको शब्दचित्रजस्ता यी अभिव्यक्तिले पाठकलाई उपन्यासको आरम्भमै सौन्दर्यको आनन् ...
उद्भट समालोचक कृष्ण गौतमले जीवनमा कति आख्यान पढे, कति आख्यानलाई उत्तरआधुनिक चस्माले हेरे । पढ्ने र हेर्ने लामै सिलसिला चल्यो । तर, आख्यानमा रानीवन कतै देखिएन । कसैले रानीवन नदेखेपछि आफैं अघि सरे र ल्याए एउटा रमणीय आख्यान, ‘रानीवन ।’ पुगनपुग एक शताब्दीभित्र कथा या उपन्यासका नाममा एक ट्रक ...
- मोहन मैनाली-भुइयाँ , विधा : गैरआख्यानका विविध, लेखक : यज्ञश, प्रकाशक : फाइनप्रिन्ट, मूल्य : ३८० (हार्डकभर)आश्विन २८, २०७४-२०६९ सालमा नेपालका दैनिक पत्रिकामा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई मुसहर, दलित, थारू आदि उत्पीडित मानिसहरूका घरमा बास बस्न पुगेको समाचार छापिएका थिए । यो समाचार अहिले पनि धेरैले ...